အော်ရိုကနေ ဘယ်နဲ့ ဦးဦးမှော်ဆရာကိုလှမ်းအော်နေရတာလဲ။သတိထားပါဦး။
On Feb 9, 2012, at 2:51 PM, အရိပ်လေး <image988@gmail.com> wrote:
012/2/9 Pao Wyne <eniweniw@googlemail.com>
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ . ။
ကျနော် ဖေဖ၀ါရီလ ဒုတိယပါတ်အတွင်း ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါမည် . ။
စင်ကာပူမှာ သင်္ဘော ဆင်းမှာဖြစ်ပြီး စလုံးမှာ တစ်ည အိပ်ပြီး မှ ပြန်ရဖို့ များပါသည်။
ရန်ကုန်ရောက်လျှင် group အတွင်းမှ စာပေမိတ်ဆွေ ချစ်မိတ်ဆွေများကို တွေ
" အချစ်နဲ့ ထိတွေ့ရင်လူတိုင်းဟာ ကဗျာဆရာဖြစ်လာတတ်တယ်။ " (ပလေတို)
[mrsorcerer:18366] Fwd: အခြေခံပါဠိဖတ်နည်းမူသေစည်း
From: Hla Tun <hlatun.tun86@gmail.com>
Subject: Fwd: အခြေခံပါဠိဖတ်နည်းမူသေစည်း
To: ဆန်နီနေမင်း <sanninaymin@gmail.com>
Cc: 2010kaythitun@gmail.com, 2012maythukyaw@gmail.com, 8khine8@gmail.com, agkolatt.star@gmail.com, anglegirl1356@gmail.com, athelay@blumail.org, aungaungnaing2011@gmail.com, aunglwintun09@gmail.com, aungnaing80@gmail.com, ayarhtoon@gmail.com, ayechanko28@gmail.com, ayemyaphyu106@gmail.com, ayoetharsone@gmail.com, azamfeby@gmail.com, blackdoggyi1985@googlemail.com, bloodknight.81@gmail.com, bright0985@googlemail.com, candana199@gmail.com, carrotrabbit.mine@gmail.com, chattingvandarsar@gmail.com, chitthansincho@gmail.com, chocholwin10@googlemail.com, chothandar.2010@gmail.com, conan.hen123@gmail.com, dadamgmg@gmail.com, devilhome2010@gmail.com, dhammalink@gmail.com, dhfttp800@gmail.com, dmyotun757@gmail.com, doublefriend.9@gmail.com, dragon588282@gmail.com, dragonslikeboy@gmail.com, eieisoetzi@gmail.com, examplecrazy1500@gmail.com, fourkyaw@gmail.com, guofusheng2011@gmail.com, hackmen1010@googlemail.com, hantharoo.39@gmail.com, hnin.february@googlemail.com, hninwar2009@gmail.com, htetwaiyan299@gmail.com, itachi.sharinghan@gmail.com, jameswailliam@gmail.com, joo453@gmail.com, juejuepanlay@gmail.com, june.june20199@gmail.com, kalyanisima@gmail.com, kgmalay5732@gmail.com, khanaung12@gmail.com, kinsan.dar@gmail.com, kkmaungwin@gmail.com, kmtmonty.kyi@gmail.com, koboedaw@gmail.com, kochan185@gmail.com, kohtaylwin2010@gmail.com, kojetli@gmail.com, kokosundara@gmail.com, kolay070@gmail.com, konanda343@gmail.com, konaymyo.1500@gmail.com, konyinaymin@gmail.com, kothiha1500@gmail.com, kounglay12589@gmail.com, kozawlatt30780@gmail.com, kumara.luck7@gmail.com, kunndala.uk@gmail.com, kwkw067@gmail.com, kyalsin.sin.44@gmail.com, kyawcthu83@gmail.com, kyawn65@gmail.com, kyawzinoo.thargyi@gmail.com, lapyaewin72@gmail.com, lapyaewon453@gmail.com, latinboylay@gmail.com, laylayinternet.mgn@gmail.com, linkhantmaung111@gmail.com, lonmay1@gmail.com, loveme.the@gmail.com, luchit789@googlemail.com, lwinmarmyo@blumail.org, lwinminkhant1@gmail.com, lyrics12589@gmail.com, macherry2011@gmail.com, magicboy.258@gmail.com, marnabuyin5555@gmail.com, mathin777@googlemail.com, maylwinpan@gmail.com, mctharnay.nhm@gmail.com, mgphyu94.tgi@gmail.com, mingalarevening@gmail.com, minnaing4@gmail.com, mizukosantdt@gmail.com, mmmw2008@gmail.com, mmon.mlm@gmail.com, mnsoe2012@gmail.com, mr.moeset1987@gmail.com, mrsorcerer@googlegroups.com, myomyat.jp@gmail.com, myozawoo86@gmail.com, mysterious.boy93.009@gmail.com, nainglove99@gmail.com, naingtn.tun821@gmail.com, nangnoumseng@googlemail.com, nangnyunt@gmail.com, nateben4@gmail.com, naw.nawloo.naw@gmail.com, nayminzayyar.2010@gmail.com, naymoe.161189@gmail.com, naymyohtet1988@gmail.com, naypyeedaw@gmail.com, naywinhtay888@gmail.com, nayzarsoe.htr@gmail.com, nayzawkoko@gmail.com, newyeargirl1996@gmail.com, ngaba024@gmail.com, ngaphyo2010@gmail.com, ngateeo@gmail.com, nguwar80@gmail.com, nileriver7@gmail.com, ningar10@gmail.com, ninja90888@gmail.com, nobalglory@gmail.com, nweni3@gmail.com, nyanaagga@gmail.com, nyeinchan.nych@gmail.com, nyeinchan110@gmail.com, nyeinnyeinzaw912@gmail.com, nyihtway01@gmail.com, nyinekhine79@gmail.com, nyinyitun007@gmail.com, pannthetinn@gmail.com, panpadauk2010.myanmar@gmail.com, pearlsmile14@gmail.com, philosophermgmyathar@gmail.com, phoepyae.kawthaung@gmail.com, phonemyintoo276@gmail.com, phwayphway.sg@gmail.com, phyoaung009@gmail.com, phyoedevillay@gmail.com, phyokyawlwin@gmail.com, phyoseasky@gmail.com, phyozawoo1@gmail.com, phyuthi9@gmail.com, pleaselove6@gmail.com, plinn095@gmail.com, poneyatepamar.96@gmail.com, poohgirls22@gmail.com, poppinn@googlemail.com, posher21@gmail.com, prizeformum@gmail.com, projectone.linn@gmail.com, punk0014@gmail.com, punknaturallove371@gmail.com, pyonemaungmaung50@gmail.com, queenlover3000.mgn@gmail.com, questqueenhero@gmail.com, rainbowwarriors.rbg@gmail.com, rainskystar1@gmail.com, ran.naing24@gmail.com, redflower@blumail.org, rockm594@gmail.com, romancehuman@gmail.com, royal.thazin108@gmail.com, s.su028@gmail.com, saihseha@gmail.com, sainoomkhay.shanlay@gmail.com, sainyihtwe@gmail.com, saiwanna007@gmail.com, salaizamte09@gmail.com, sandilamin@gmail.com, sandykyawdin@gmail.com, sannsannyu2010@gmail.com, sapal80@gmail.com, saungpyartho29@gmail.com, sauveur.saviour@gmail.com, sawhtoaung@gmail.com, sawsaleainsoe@gmail.com, secondaryjuliet@gmail.com, sedate.winko@gmail.com, septemberwinhtut@gmail.com, shane.westlife279@gmail.com, shinnovel@gmail.com, shinnthant1@gmail.com, shinthentlwin@gmail.com, shweasin86@gmail.com, shwelincho@gmail.com, shwemoe84@gmail.com, shwethant18@gmail.com, shwethoungyin@gmail.com, shwewar7@gmail.com, silentprince000@gmail.com, sitkwinthar.1@gmail.com, slimnot2009@gmail.com, smiledeathnoteforever@gmail.com, sminnhtun@gmail.com, sn.hteinwinaung85@gmail.com, snowberry97@googlemail.com, snowqueen.185@gmail.com, soe.min@gmail.com, soemoe1989.pol@gmail.com, soenanwaidae@gmail.com, soethihakyaw007@gmail.com, soewin.pku@gmail.com, songooster@gmail.com, soundnadi08@gmail.com, spt357@gmail.com, spy.cia.usa@gmail.com, starligh1500@gmail.com, starprince444@gmail.com, stonespy@gmail.com, su.crypticrystal@gmail.com, suehonepound@gmail.com, supergoldstar81@gmail.com, tayaw2012@gmail.com, teetotaller.27@gmail.com, thaekokothein@gmail.com, thalinpwent@gmail.com, thandaraung.ucsy@gmail.com, thanhtike@gmail.com, thapyay92@gmail.com, thawsun@gmail.com, thayawon@gmail.com, theingisoe09@googlemail.com, thered1990@gmail.com, thetnayaungt@gmail.com, thistsarpan901@gmail.com, thuthumyintkyi@gmail.com, thuyamon@gmail.com, tinmaunghtet@gmail.com, tintmyokhaing@gmail.com, tringme@gmail.com, troublemaker.troublemaker@gmail.com, trustmyself27@gmail.com, tunlinkyaw6@gmail.com, tunnying101@gmail.com, tuntun8888aung@gmail.com, uktkawsaw@gmail.com, ven.kumara@gmail.com, ven.nyana.pyinoolwin@gmail.com, ven.pandava2011@gmail.com, venindacariya61@gmail.com, venthu2010@gmail.com, venusbrave7@gmail.com, venvasava2010@gmail.com, virusking800@gmail.com, vkusala09@gmail.com, wailinn.dreamer@gmail.com, waiminnsann@gmail.com, waiyan197@gmail.com, waiyan780@gmail.com, waiyanlinsbo@gmail.com, waiyanmin03@gmail.com, wantlovefairy1@gmail.com, whiteheartreflection@gmail.com, win.heinzaw@gmail.com, win9ban@gmail.com, winhtain1973@gmail.com, winzawlatt2011@gmail.com, winzawsky.wzs@gmail.com, wth.aprial@gmail.com, yabl.275@gmail.com, yamonhnin@gmail.com, yankintharrr@gmail.com, yanpaing101010@gmail.com, yanyan.ru8389@gmail.com, yarhu.83@gmail.com, yazar007@gmail.com, yeelay0@gmail.com, yeelayl93@gmail.com, yegyi1989@gmail.com, yeinhwam@gmail.com, yelinaungy.l@gmail.com, yenaingaung123@gmail.com, yethu125@gmail.com, yetunnaing.2011@gmail.com, yeyint.2013@gmail.com, yhwucss@googlemail.com, yinkhonthan952@gmail.com, yinmintun4@gmail.com, ymhtun86@gmail.com, ynhs007@gmail.com, ytlwaitun@gmail.com, yuya.phyu23@gmail.com, zawlinhtike12@gmail.com, zawmyo15000@gmail.com, zawthetaung007@gmail.com, zawwinchina@gmail.com, zawzaw005@gmail.com, zawzawaung49@gmail.com, zayarkoko720@gmail.com, zayyarlin2222@gmail.com, zeroman090@gmail.com, zhero62@gmail.com, zinlinn.8@gmail.com, zinmar223@gmail.com, zinmarlwin.march@gmail.com, zinmayni@gmail.com, zinphyo105@gmail.com, zinzin@gmail.com, "ANDREW @" <andrew3175@gmail.com>, Aung Thet Naing <agthetnaing@gmail.com>, Aungaung Aungaung <aungaung.aung1980@gmail.com>, fool mad <escape.thayet@gmail.com>, forever interviews <forever.interviews@gmail.com>, Han Htun Min <hanhtunmin@gmail.com>, Human Truth <barnay.87@googlemail.com>, kan win oung <kanwinoung@gmail.com>, ko zaw <kozawthanoo99@gmail.com>, kyaw myo maung <kyawmyomaung001@gmail.com>, Kyaw Thuya <kyawthuya81@gmail.com>, Kyawwin Tun <kyawwintun.tun6@gmail.com>, lawka nartha <lawkanartha@gmail.com>, Limit <linminaung@gmail.com>, Lu Bo <lubo601@gmail.com>, lwimmoe naing <fairlyboy@gmail.com>, Lynn Htet Swe <myatchitshin@googlemail.com>, Maung Kyi <maungmaungkyi@gmail.com>, Maung Myo Myo <myomgmg08@gmail.com>, min min Soe <opalmmsoe@gmail.com>, Naing Min <naing.min14@gmail.com>, NayKo Min <naykomin32@gmail.com>, Nemo Inferno <nemo.inferno@gmail.com>, nway tamun <nwaytamun@gmail.com>, Nwe Nwe Win <manwenwewin35@gmail.com>, phone <phonenaing1971@gmail.com>, poe san <phoesan@gmail.com>, rajindar lankara <rajinda.pandaung@gmail.com>, sai naung <sainaung11@gmail.com>, saunglinkar nwe <nwaylinkar@gmail.com>, Sein Ban <ban673@googlemail.com>, seinter tee <seintertee995@gmail.com>, si thu phyo <sithuphyo835@gmail.com>, So Pyay Hlaing <sopyayhlaing@hotmail.com>, star man <star.man415@gmail.com>, Susan Weah <susan_88weah@yahoo.co.uk>, thant zin <jaltaryar@gmail.com>, thanwinzaw zaw <thanwinzaw43@gmail.com>, Thaw Zin Min <ttout90@gmail.com>, Thet Naing Tun <thetnaingtun55@gmail.com>, thi ha <thihastar94@gmail.com>, Thura Min Saw <thuraminsaw@gmail.com>, tun tun <tuntun20008@gmail.com>, tun tun <tuntunkalay@gmail.com>, win dragonking <windragonking09@googlemail.com>, win zaw <winzawshwebo@gmail.com>, winkyawမလေးရှား <winkyaw191@gmail.com>, yanwin <yanwinn@googlemail.com>, Yaung Nying <yaungnying@gmail.com>, yaw lay <yawlaynpt@gmail.com>, Ye Nyunt <kokoyenyunt@gmail.com>, YeZaw Htun <yezawhtun@gmail.com>, zeyar tun <ze.yar2008@googlemail.com>, ကိုကိုသုစံ၊ရွှေပြည်သာ <thusan2012@gmail.com>, ကိုထက်၊ရန်ကုန် <lovinggas@gmail.com>, ကိုမိုး၊ရနောင်း <komoe775@gmail.com>, ကိုရင်၊ဓနုဖြူ <soeminmin201@gmail.com>, ကိုရင်၊ရန်ကုန် <saiwaiphyo.sai@gmail.com>, ကိုနိုင်၊စင်္ကာပူ <lazybony@gmail.com>, ခင်မောင်ဝင်း၊ရန်ကုန် <samelann@gmail.com>, ခန့်ညားသူ၊ရန်ကုန် <khantnyarthu21@gmail.com>, ခိုင်သူဇာမြင့်၊ရန်ကုန် <khinethuzarmyint8@gmail.com>, ခိုင်ဝင်းထွဋ်၊ဟင်္သာတ <khainggyiyonthalin@gmail.com>, ချစ်ကိုကို၊အင်းစိန် <mgmyogyi5@googlemail.com>, ခွါလ် ပူ <khualpu0072@gmail.com>, စစ်မင်းသိုက်၊အင်းစိန်၊ <kathitni1980@gmail.com>, စန်းလှိုင်ဦး၊ရုရှား <sanhlaingoo2923mpei@gmail.com>, စိုင်းခမ်းအောင်၊ရန်ကုန် <badsamy@gmail.com>, စိုင်းခွန်းနော်၊ရန်ကုန်။ဆိုဒ်ပိုင်ရှင် <saikawnnaw@gmail.com>, စိုင်းတော်ဝင်၊သန်လျင် <saitawwinvirgo@gmail.com>, စိုင်းနောင်းဝင်း၊မုံရွာတစ်ဘက်ကမ်း <visio1@gmail.com>, စိုင်းနေ၀င်းသိန်း၊မလေးရှားအင်တာနက်ဆိုင် <naywin105@gmail.com>, စိုးထက်နောင်၊ရန်ကုန် <moehtatkaungkin.florence@gmail.com>, စန္ဒော၊ သမာဓိ <sandawbasa@gmail.com>, ဆရာမ-ပြည် <twetweaye66@gmail.com>, ဆုမြတ်မွန်၊ရန်ကုန် <sapphiresweety@gmail.com>, ဇင်သီတာအေး၊ မကွေး <3meemee@gmail.com>, ညီမ28ပြည့်ပြည့်၊နေပြည်တော်၊ပြန်ကြားရေး <pyaepyae68@gmail.com>, ညီမဇွန်မွန်မွန်ကျော်၊မန်းလေး <thuzarwin68@gmail.com>, ညီမနီလာဝေ၊လားရှိုး <kawktay2008@gmail.com>, ညီမပန်းအိစံ၊ရန်ကုန် <paneisan1985@gmail.com>, ညီမမိုက်၊ကချင်၊လားရှိုး <wisdomhkawn@gmail.com>, ညီမမိုချိ၊ရန်ကုန် <jerrylay105@gmail.com>, ညီမမိုးသူဇာ၊မြင်းခြံ <apple001.apple0001@gmail.com>, ညီမလဲ့လဲ့ဝင်း၊မှော်ဘီ၊ ရခိုင် <lei.lei.lwin2011@gmail.com>, ညီမအိအိဝါ၊ပုသိမ် 23 <eiei.war751@gmail.com>, ညီမမေဇင်၊ကမ္ဘာအေး <starrysky.phyu5@gmail.com>, ညီမအေးပပအောင်၊မော်လမြိုင် <ayepa2011@gmail.com>, "ညီမဖြူမေ၀င်း၊ရခိုင်(၂)" <maywin789@gmail.com>, ညီမဖြူမေ၀င်း၊ရန်ကုန်ရခိုင် <phyunwewin2011@gmail.com>, တင်ဇာလွင်၊တောင်ကြီး၊ရန်ကုန်အလုပ် <zarlwin9@gmail.com>, တင်ညီညီဝင်း၊ရေနံချောင်း <tinnyinyiwin@gmail.com>, ထက်စုနှင်းဆီ၊အမေရိကန် <htet.su.hninse@gmail.com>, ထက်မင်းဦး၊တရုတ်ပေကျင်း <mc.happyghost@gmail.com>, ထွန်းထွန်းဦး၊ပီနန်း <rockhtun@gmail.com>, ပညာနန္ဒ၊နပသ၊သီရိလင်္ကာ <pannananda01@gmail.com>, ဗိုလ်လင်း၊မလေးရှား <lwannaythubl@gmail.com>, မခင်သီတာ၊ရန်ကုန် <rekha682@gmail.com>, မခိုင်၊နေပြည်တော် <venus9111@gmail.com>, မင်းသူ၊နေပြည်တော် <tatkoneminthu@gmail.com>, မလှ၊နေပြည်တော် <thaethaelay25@gmail.com>, မိုးဆက်၊ရန်ကုန် <gipsyboy1500.net@gmail.com>, မိုးတိမ်၊ထိုင်း၊လီဆူး <zykmoetain@gmail.com>, မိုးအောင်၊ထိုင်းမဟာချိုင်း <ttunbrother@gmail.com>, မချောစု၊ပဲခူး၊ ရန်ကုန်အလုပ်လုပ်နေ <laminphyu3@gmail.com>, မဆောင်း၊ ပင်လောင်မြို့ <decemberphoo.83@gmail.com>, မျက်မှန်ဦးဇင်း <arroneciecer@gmail.com>, မျိုးလွင်ဦး၊ပဲခူး <myolwinoo100@gmail.com>, မမြတ်ဝင်းချို၊ရန်ကုန် <myatwincho@gmail.com>, မဖြိုးဖြိုးဝေ၊မန်းလေး၊ခရစ်ယာန် <skykin2010@gmail.com>, ယမင်းအေး၊မလေးရှား <creepermon@gmail.com>, ရတုနိုင်၊သာကေတ <ratunaing@gmail.com>, ရန်နိုင်ငယ်၊ဗိုလ်တစ်ထောင် <yanaingaung.kpd@gmail.com>, ရီရီပြုံး၊ ပျဉ်းမနား <beautifulsmile2008@gmail.com>, ရူပနန္ဒီ <nweniwinmacho@gmail.com>, ရဲမင်းအောင်၊မလေးရှား <yanlinn005@gmail.com>, ရဲသူရစိုး၊ရုရှား <vampirediary.x@gmail.com>, ရှိတ်ဂျာနယ်မကွေးတာဝန်ခံ <shwelannwelan@gmail.com>, သက်သက်၊ရန်ကုန် <wintersong.2011@gmail.com>, သက်ထွေးအောင်၊ပုသိမ် <phoneminhlan@gmail.com>, သန်းထိုက်၊ ပုသိမ် <myozawhtoo@gmail.com>, သန်းထွန်းအောင်၊သာကေတ <thantoeag@gmail.com>, သန်းထွန်း၊စေတုတ္တရာမြို့၊မကွေးတိုင်း <htunhtunlayyae.mone@gmail.com>, သမီးစုမွန်၊ စလင်း <nyanmoe94@gmail.com>, သာထွန်းကျော်၊ဗောဓိတစ်ထောင် <thartunkyaw07@gmail.com>, သာသန-ဘီစီစီ <kyawthiha02@gmail.com>, သီရိဝေ၊တောင်ဥက္ကလာ <waithiri101@gmail.com>, သူဟင်သန့်၊ရန်ကုန် <br.t.h.thant2012@gmail.com>, သင်္ဘောသားခင်ညွန့်၊ ချောက်မြို့ <khinnyunt2010@gmail.com>, အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ <entomm@gmail.com>, အင်းစိန် <ahphyuyaunglay07@gmail.com>, အမငယ်ငယ်၊ကလေး 33 <bluerosey.klm@gmail.com>, အမနီလာထွန်းရင်၊အောင်ပန်း <phyulaywai1@gmail.com>, အမမျိုးသွယ်ခိုင်၊မန်းလေး ၃၅ <chitthuzinyaw@gmail.com>, အမယမင်း၊ရန်ကုန်ဆိုဒ်ရှိတယ် <asiamasters.yma@gmail.com>, အမရှင်းကြယ်၊ရန်ကုန်၊တရုတ် <darilynlixingjie@gmail.com>, အမ၀င့်နီဝင်း၊ပုသိမ်နယ် <wintniwin9@gmail.com>, အရှင်ဥက္ကံသ <yamadasan9@gmail.com>, အရှင်ခေမာ၊မြိတ် <heartgallant.pku@gmail.com>, အာကာဝေယံ၊ရေဦး၊ရန်ကုန်ကျောင်းတက် <arkarwaiyan26@gmail.com>, ဦးဓမ္မသာမိ၊ သီရိလင်္ကာ <yieyin2009@gmail.com>, ဦးအာစိန်ညီမ၊ နပသ <phyusin.phyu13@gmail.com>, ဦးဦး မှော်ဆရာ <mrsorcerer9@gmail.com>, ဦးနေမိန်၊ထိုင်း <saffronunay@gmail.com>, ဦးဝင်းကြည်၊ရှိတ်မကွေးတာဝန်ခံ <uwinkyi123@gmail.com>, ကောက်ကြီး၊မင်းလှ <snowyuwah@gmail.com>, "ကောင်လေး၊စလင်း(၁)" <hellfire.00001@gmail.com>, ကော့သောင်းမြို့ပရဟိကျောင်းဆရာတော် <uthuzana2012@gmail.com>, ကျော်မင်းဦး၊ရန်ကုန်၊ ဆိုဒ်ရှိ <kyawminoo.it@gmail.com>, ကျော်ဦးမောင်၊စင်္ကာပူ <shwe.young.lin@gmail.com>, ဇော်ထက်အောင်၊လွိုင်လင် <smartguy.love25@gmail.com>, ဇော်မင်းနိုင်၊အုန်းချော <naing.awc@gmail.com>, ဇော်ဝင်းထွန်း၊ရန်ကုန် <bluestream.zwt@gmail.com>, ဒေါက်တာဇာနည်၊မန်းလေး <zarnilpn@googlemail.com>, ဒေါက်တာဇီဝက၊မကွေး၊ တောင်ကြီးသား။ ခွန်သန်းရွှေ <prof.dr.ziwaka@gmail.com>, ဒေါက်တာသိန်းလှိုင်၊ရန်ကုန်၊တန့်ဆည် <thein.hlaing1970@gmail.com>, ဒေါ်စိမ်းစိမ်းစံ၊မန်းလေး <seinnseinnsanwto@gmail.com>, ဒေါ်အေးအေးစိုး၊ရန်ကုန် <htinhtin1974@gmail.com>, နေမျိုးသူ၊ထိုင်းနယ်စပ် <naymyoethu@gmail.com>, နောင်နောင် <cruzbomb@gmail.com>, နေခြည်၊ရန်ကုန် <naychilinnlae@gmail.com>, ပေတိုး၊ပန်းသွေးချယ်၊ဒလရန်ကုန် <lemonmalay@gmail.com>, မောင်စိုးလေး၊ ကျောက်မဲ <soelay946@gmail.com>, မောင်ထိန်းလင်း၊ကိုးရီးယား <red.redseven.seven6@gmail.com>, မောင်လွမ်းနောင်၊အင်းစိန် <mglwannaungwytu@wytumyanmar.com>, မောင်လေး၊ကျောက်ဆည် <laminmaung11@gmail.com>, အောင်ထွန်းဦး၊ရွှေဘို <oparato@gmail.com>, အောင်ပိုင်၊နေပြည်တော်၊ရန်ကုန်သား၊ဗေဒင်ဆရာ <winkyawtkhin@gmail.com>, အောင်မင်းထိုက်၊ မန်းလေး၊ မိုးကုတ်သား <johnriches09@gmail.com>, "အောင်ဇော်နိုင်၊ငသိုက်ချောင်း(၂)" <magicpoem23@gmail.com>, အောင်အောင်ကျော်၊ အေးမြသာယာ <tear.rain1986@gmail.com>, အောင်ဖြိုးမွန်၊ကုမုဒြာဂျာနယ် <aungphyom5@gmail.com>, ဝေပုလ္လ၊နပသ <waipulla@gmail.com>, ပြည့်ဖုန်းညွှန့်၊ရန်ကုန်ဆေးကျောင်း <pyae.velocity@gmail.com>, မြင့်ကျော်၊မလေးရှား <myintkyaw20@gmail.com>, မြတ်နိုး၊မကွေး <myatnoe214@gmail.com>, ဖြိုးသူအောင်၊ မြောက်ဒဂုံ <mr.internet.mule@gmail.com>, နိုင်ဦး၊မလေးရှား <naingoo900@gmail.com>, နိုင်ဝင်းထက်၊ရန်ကုန် <naingwinhtet.84@gmail.com>, နုနုရီ၊တွံတေး <nunuyee1978@gmail.com>
Date: Fri,3Feb 2012 14:39:25 +0630
To: yinthinnei <yinthinnei@gmail.com>
ပါဠိတော်သည် ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့သည့် စကားတော်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာ
မြန်မာစကားသည် ပါဠိတော်မှ ဆင်းသက်လာပါသည်။ ယနေ့ လူငယ်များသည်
လုံးဆင့်ဖြင့်ရေးသော ပါဠိတော်စာများကို အသံထွက် မဖတ်တတ်ကြပါ။
ပရိတ်တော်များကို အသံထွက်အတိုင်းရေးသားထုတ်ဝေ နေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ထေရ၀ါဒ အပြည့်စုံဆုံး တိပိဋကရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံတော်အနေဖြင့် အဓိပ္ပာယ်သိ
ပါဠိစာမတတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဘုရားစာ ပါဠိတော်အား အသံထွက်ဖတ်တတ်ရန်
အခြေခံပါဠိတော်ဖတ်နည်းမှတ်စုကို ပေးပို့အပ်ပါသည်။ ၀င်းဖြင့်ရိုက်ထားပါ၍
မှော်ဆရာ အဖွဲ့ နှင့်ပက်သက်၍ ဝေဖန်အကြံပြုလိုပါက >>>
Re: [paowyne:1441] Re: [aurorageneration] ဖေဖ၀ါရီလ ဒူတိယပါတ်အတွင်း ပေါင်ပေါင် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါမည်။
> (၁) အခု ဖေ့ဘွတ်မှာ ပရဟိတ ( ဂရုဏာအားမာန် လူငယ်များ ) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးနဲ့
> (၂) နောက်တစ်ချက်ကတော့ အော်ရိုရာ ဂရုထဲက အချို့ က ( ကိုလွမ်း အပါအ၀င် )
> (၃) နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော် လက်တွေ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ NGO အချို့ က ပေးတဲ့
> (၄) ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ မိတ်ဆွေ အများအပြားနဲ့ ခင်မင်ချင်လို့ပါ ။
> စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြရင် ဗဲရီးစောရီး တောကြီး မြိုင်လည် ပါ ။
> ချစ်သူများနေ့အတွက် စကားလက်ဆောင်
> ပေါင်ပေါင်စာပေအဖွဲ့ မှ နေ့ စဉ်မေးလ်များ ရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/paowyne ကို နှိပ်ပြီး မန်ဘာဝင်နိုင်ပါသည် ။ မန်ဘာဝင်များ မိမိသိထားသည်များကို မျှဝေလိုပါက paowyne@googlegroups.com သို.မေးလ်ပို.နိုင်ပါသည်။ ပေါင်ပေါင်စာပေအဖွဲ့ မှ နှုတ်ထွက်လိုလျှင် paowyne+unsubscribe@googlegroups.com ကိုနှိပ်ပြီး မေးလ်ပို.ပါ ။ စာလက်ခံလိုသည့်ပုံစံ ပြင်လိုလျှင် (သို့) စာမလိုချင်ပဲ Website မှသာဖတ်ရန် http://groups.google.com/group/paowyne?hl=en ကို သွားပါ ။
> အကြံပေးစာများကို ပေါင်ပေါင် ( eniweniw@gmail.com ) ထံသို. ပေးပို.နိုင်ပါသည် ။
အရိပ်ရေ ။ ဒီလိုပါ ။ ကျနော်က အကျိုးမဲ့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျနော်က
ရုပ်ရှင်မင်းသားလဲ မဟုတ်လို့ကျနော်ပြန်တာ သွားတာ စိတ်ဝင်စားကြမှာလဲ
မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ် ။ ( ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေ ထက် ပိုချောနေတာတော့
သတ်သတ်ပေါ့နော် ။ ဟိဟိ )
ပေါင်ပေါင့်ရည်ရွယ်ချက်က
(၁) အခု ဖေ့ဘွတ်မှာ ပရဟိတ ( ဂရုဏာအားမာန် လူငယ်များ ) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးနဲ့
ချိတ်ဆက်မိလို့ ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ သူတို့ ရဲ့ အက်တစ်ဗတီတွေ ကို
ပါကောင်းပါဝင် ကူညီဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ် ။ ပေါင်ပေါင်တင်မက ဒီလို
ပေါင်တို့ မေးလ် ဂရုက အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတွေ ပါ စိတ်ဝင်စားရင်
ပါဝင်နိုင်အောင် ပြင်ပ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိတဲ့အခါ ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်
လူချင်းတွေ့လိုက တွေ့နိုင်ကြောင်း ပြောတာပါ ။ အလှူခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ကျနော်လဲ ခုထိ အဲ့ အဖွဲ့ကို တစ်ပြားမှ မလှူသေးပါဘူး ။ ငွေ အားနဲ့
မဟုတ်တောင် လူအင်အားနဲ့ ကူညီဖို့ သင့်မသင့် ကိုယ်တိုင်
လေ့လာကြည့်နိုင်ကြောင်း ဖိတ်ကြားချင်လို့ပါ ။ အွန်လိုင်းမှာ နိုင်ငံအတွက်
ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ကဗျာတွေ ရေး စာတွေ ရေး အရေမရ အဖတ်မရ လေကန်ပေးပြီး
တကဲ့ အပြင်မှာ တော့ လူလုံးထွက်မပြရဲတဲ့ သူတွေ ၊ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှု ဘာမှ
မရှိတဲ့သူတွေ လိုမျိုးတော့အွန်လိုင်းမှာပဲ လေကန်ပြီး ပြီးမနေနိုင်ပါဘူး
။ ကျနော်တို့က လက်တွေ့ကို ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့သူတွေ ဆိုပါတော့ ။
(၂) နောက်တစ်ချက်ကတော့ အော်ရိုရာ ဂရုထဲက အချို့ က ( ကိုလွမ်း အပါအ၀င် )
ကျနော့ကို အကောင့်ပွားအများကြီးသုံးနေသူလို့ ထင်နေပါတယ် ။ နေမင်းဆိုသူ
ဦးဦးဒေါ်လာဆိုသူ မီးပြတိုက်ဆိုသူ နဲ့ကျနော် တူတူမဟုတ်ကြောင်း
သံသယကင်းစေဖို့ကျနော့ဘက်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပြချင်ယုံသတ်သတ်ပါ ။
အွန်လိုင်းမှာ ဥပဒေမဲ့ လှုံ့ ဆော်ရေးစာတွေရေးပြီး ကိုယ့်မျက်ခွက်ကိုယ်
မပြရဲသူတွေလို ကျနော်က ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ရှိစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ် ။ ယနေ
့ထိ ကျနော် ရေးတဲ့စာတွေ တင်တဲ့ပိုစ့်တွေကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့
အတွက် ဥပဒေနဲ့ မညီမလွတ်တာ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်တဲ့အတွက် ကျနော်
လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ မိတ်ဆွေများကို မျက်နှာချင်းဆိုင်နိုင်သလို ကျနော့လို
ဥပဒေဘောင်တွင်း ပွင့်လင်းစွာ နေထိုင်သူမိတ်ဆွေများနဲ့လဲ
တွေ့ဆုံမိတ်ဖွဲ့လိုတာ တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် ။
(၃) နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော် လက်တွေ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ NGO အချို့ က ပေးတဲ့
ကျန်းမာရေး ၊ စာပေရေးရာ ၊ လူမှုရေး စတဲ့ အစီအစဉ်တွေအတွက်
သင်တန်းလိုမျိုးတွေ ပေးတဲ့အခါ ၊ အက်တစ်ဗတီတွေ ရှိတဲ့အခါ ။
ဗော်လန်ထီယာအဖြစ် ပေါင်ပေါင်ကိုယ်တိုင် ပုဂိုလ်ရေး ရင်းနှိးပြီး
သိကျွမ်းတဲ့ မိတ်ဆွေတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလို့ရအောင်ပါ ။
(၄) ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ မိတ်ဆွေ အများအပြားနဲ့ ခင်မင်ချင်လို့ပါ ။
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြရင် ဗဲရီးစောရီး တောကြီး မြိုင်လည် ပါ ။
2012/2/9 aung <aaung.mk@gmail.com>
ဟုတ်ပါတယ် ကိုမာဃ ပြောတဲ့အစီအစဉ်က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့
ပါဝင်ဖို့ အသင့်ပါ... တကယ်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် အချိန် နဲ့
On Feb 7, 6:12 pm, demon prince13 <demonprinc...@gmail.com> wrote:
> အဖွဲ့ထဲမှာ ဟိုအကြောင်းကို အငြင်းပွား ၊ ဒီအကြောင်းကိုအငြင်းပွား
> နေကြတာတွေ့တော့ ကျနော် တခုတွေးမိတာရှိတယ် ။ တို့
> အဖွဲ့သားတွေဒီလိုအငြင်းပွားနေကြမဲ့အစား အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာ
> ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲလို့လေ ။ တွေးမိတာလေးပါ ။
> ဖော်လို့ရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ် ။ဥပမာ။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေထဲက
> လူမှု့ရေးလုပ်ငန်းဝါသနာပါရာလူတွေကိုစု . . . အရေးအကြောင်းရှိရင် အားတဲ့လူတွေက
> လိုက်ပြီးအဖွဲလိုက်ကူညီလို့ရတာပေါ့ ။
> တခြား ဂရုလ်တွေ ၊ဆိုဒ်တွေ ၊ အဖွဲ့တွေလဲ ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာလေးတွေ တွေ့ရတယ် ။
> အားလုံးပဲ တွေးကြည့်ကြပါဦး ။
> * မာဃလုလင်*
> * (http://margaluelin.blogspot.com/*)
[mrsorcerer:18363] Fwd: အခြေခံပါဠိဖတ်နည်းမူသေစည်း